विश्वकप छनोट: नेपालको प्रदर्शनलार्इ सी ग्रेड, कुन देशले कुन ग्रेड पाए ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
विश्वकप छनोट: नेपालको प्रदर्शनलार्इ सी ग्रेड, कुन देशले कुन ग्रेड पाए ?
काठमाडौं । विश्वकप छनोटमा नेपालको प्रदर्शनलार्इ अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्(अाइसीसी)ले सी ग्रेड दिएको छ। विश्वकप छनोटमा अाठौं स्थान हासिल गरेको नेपालको सम्पूर्ण रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्दै उसले सी ग्रेड दिएको हो।
नेपालले समूह चरणका चार खेल मध्ये तीनमा हार र एकमा जित निकालेको थियो। हङकङबाहेक समूह चरणमा नेपाल जिम्बावे, स्कटल्याण्ड र अफगानिस्तानसँग पराजित भएको थियो।
समुह चरणको पहिलो खेलमा नेपालले जिम्बावेसँग १ सय १६ रनले, स्कटल्याण्ड ४ विकेटले तथा अफगानिस्तानसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो। लगातार तीन खेल गुमाएपछि सुपरसिक्समा पुग्ने सम्भावना गुमाएको नेपालले चौथो खेलमा हङकङलार्इ ५ विकेटले पराजित गर्दै एक दिवसीय मान्यता पाउने सम्भावना भने जिवितै राखेको थियो।
यस्तै प्लेअफमा पपुवा न्यूगिनीलार्इ ६ विकेटले पराजित गर्दै एकदिवसीय मान्यता पाएको नेपाल सातौं स्थानका लागि शनिबार भएको खेलमा भने नेदरल्याण्डसँग ४५ रनले पराजित भएको थियो। समग्रमा ६ खेल खेल्दा नेपालले २ खेलमा जित र ४ खेलमा हार बेहोरेपछि अाइसीसीले नेपाललार्इ सी ग्रेड दिएको हो।
सम्बन्धित समाचार: नेपालले पायो एकदिवसीय मान्यता
नेपालसँगै अाइसीसीले अन्य राष्ट्रहरुलार्इ निम्नानुसार ग्रेड दिएको छ:-
हङकङ: डी ग्रेड
नेदरल्याण्ड्स: सी ग्रेड
पपुवा न्यूगिनी: डी ग्रेड
नेपालसहितका यी टोलीहरुले प्रतियोगिताको यात्रा टुंग्याइसकेका छन्। बाँकी टोलीहरु भने सुपरसिक्स खेलिरहेका छन्।